ကား, Estate Car ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
AD VAN (118)
Honda Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Toyota
Root Category (854)
A/C: Front (280)
A/C: Rear (108)
Cassette Radio (280)
Black Toyota Fielder 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 202 ညှိနှိုင်း
Lks 204 ညှိနှိုင်း
Lks 206 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Fielder 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Silver Toyota Fielder 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
လူစီး ၀န်တင် နှစ်မျိုးသုံး စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်များ
ပုံမှန်လူစီးကားတွေထက် ရှည်ပြီး ထိုင်ခုံရဲ့အနောက်မှာ ပစ္စည်းတင်ဖို့ နေရာ ကျယ်ကျယ်ရှိတဲ့ စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူစီးနိင်ရုံသာမက အလိုရှိတဲ့ ၀န်အနည်းအကျဉ်းကိုလည်း အဆင်ပြေပြေ တင်နိင်စေတဲ့ အတွက် စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်တွေဟာ ကားဈေးကွက်တွေနဲ့ လူစီး အဌားယာဉ်တွေရဲ့ ဈေးကွက်မှာ ထင်ရှားပါတယ်။ စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်တွေထဲမှ ၁၃၀၀ စီစီ ၁၅၀၀ စီစီ အင်ဂျင် သေးပြီး ဆီစားသက်သာတဲ့ ကားတွေကို ရွေးနိင်သလို့ ၀န်တင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုန်းအား ကောင်းပြီး ဆီစားနည်းဖို့ အတွက် ဒီဇယ် အင်ဂျင် ကားအမျိုးအစားတွေကို လည်း ရွေးနိင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်း အသုံးများ စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်များ
တိုယိုတာ ထဲမှာဆို ကိုရိုလာ ဖီးဒါ ၊ ပရိုဘောက် ၊ ဆတ်စီ၊ ကယ်ဒီနား၊ ၀က်ရှ် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား တိုယိုတာ ပရီရစ်တို့လို စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပရိုဘောက်ထဲမှာမှ ဒီဇယ် ၁၄၀၀ စီစီ ပရိုဘောက်နဲ့ ၁၃၀၀ စီစီ ၊ ၁၅၀၀ စီစီ ပရိုဘောက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီဇယ်နဲ့ ဓာတ်ဆီ ကွာခြားချက်က ဈေးနှုန်းမှာ (၁၀) သိန်း ပတ်ဝန်းကျင်လောက် ဒီဇယ် အင်ဂျင်က ပိုများပြီး ဂီယာမှာ မန်နျူးယယ် ဖြစ်သွားပါမယ်။
နစ်ဆန်း ၀င်းရုတ်၊ နစ်ဆန်း အေဒီ ဗန် တို့လည်း ရှိပါသေးတယ်။ (၅) ယောက်စီး စတေရှင် ၀ဘ်ဂွန်တွေပါပဲ။ သူတို့က နာမည်သာ ကွဲတာပါ။ တကယ်တော့ ပလတ်ဖောင်း လိုင်းက တူတူပါပဲ။ ၁၃၀၀ စီစီရှိတဲ့ အေဒီဗန်ကားတွေနဲ့ ၁၅၀၀ စီစီရှိတဲ့ အေဒီဗန်ကားတွေကို အ၀ယ်လိုက်ပါတယ်။ လူသုံးများပါတယ်။
ပြည်တွင်း အဌားယာဉ် အချို့မှာ တွေ့ရတဲ့ စတေရှင်ကား အမျိုးအစားများ
တက္ကစီတွေမှာ အတွေ့ရများတာက တိုယိုတာ ပရိုဘောက်၊ တိုယိုတာ ကော်ရိုနား၊ တိုယိုတာ တို့ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာ ကယ်ဒီနား ပုံပြောင်း စက်ရုပ် တွေကိုတော့ သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ ရိုးရိုး ကယ်ဒီးနားလောက်သာ တွေ့ရပါတယ်။ တိုယိုတာ ဖီဒါးကို လည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပေမဲ့လို့ ကားအထဲက ထိုင်ခုံတွေက ရှန်မ္မိုင်း တွေနဲ့ ဖြစ်တာမို့ အပေလွယ်လို့ တက္ကစီ သမား အနည်းအကျဉ်းသာ အဌားယာဉ် အဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ နစ်ဆန်း အေဒီဗန်ကိုလည်း တွေ့နိင်ပါတယ်။
အကြမ်းဖျင်း ဈေးနှုန်းများ အနေနဲ့ ကျပ်သိန်း (၂၀၀) လောက်ဆိုလျှင် တိုယိုတာ ကိုရိုလာ ဖီးဒါ ကားမော်ဒယ်၊ ဂရိတ် အမြင့်နဲ့ တိုယိုတာ ၀က်ရ်ှတို့ကို ရရှိနိင်ပါလိမ့်မယ်။ ကယ်ဒီနား၊ ပရိုဘောက်တို့ဆိုလျှင် ကျပ်သိန်း (၁၀၀) အောက်တွင် ရနိင်သလို ကျပ်သိန်း (၁၂၅) လောက်ဖြင့်လည်း ရနိင်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း အတွက်ကတော့ ကျပ်သိန်း (၁၀၀) ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပါတယ်။